Mixpanel: Gawaarida, Falanqaynta Dhacdooyinka-Gawaarida | Martech Zone
Mixpanel: Gawaarida, Falanqaynta Dhacdooyinka
Jimcaha, Agoosto 16, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa maxay muuqaalka bogga ma khusaysaa meheraddaada? Ma ogtahay Ma hubtaa? Waan ogahay in mararka qaar aan helno tan oo taraafiko ah iyo macno malahan, iyo waqtiyada kale waxaan helnaa dhowr booqashooyin oo waaweyn oo horseeda xiriir ganacsi oo weyn. Aragtida suuqgeynta ayaa ah in intaa ka sii fiican ay ka fiican tahay sidaa darteed dhammaanteen waxaan raaceynaa hoggaanka. Laakiin ma inaan leenahay?
Waxaan ka qornay waxqabad Analytics ka hor - like Budhcad-badeedda loogu talagalay ganacsiyada ku saleysan rukunka. Jiilkan cusub ee Analytics codsiyada kuma shaqeeyaan isla halbeegyadii aan la shaqeynaynay 2-dii sano ee la soo dhaafay. Waxay ka shaqeeyaan hawsha booqdaha uu ku qaadanayo markay marayaan bartaada.
Mixpanel waa dhacdo dhacdo Analytics madal loo dhisay in loo habeeyo goob kasta oo internetka ah, barxad ku saleysan websaydh ama codsi moobiil ah.
Mixpanel waa ugu horumarsan Analytics madal loogu talagalay mobilka & shabakadda. Halkii aad ka cabi lahayd aragtida bogga, waxay kaa caawinaysaa inaad falanqeyso falalka ay dadku ku qaadaan dalabkaaga. Ficil wuxuu noqon karaa wax kasta - qof uploading sawir, ciyaaro video, ama la wadaago boostada, tusaale ahaan.
Barxadda 'Mixpanel platform' waxay kuu oggolaaneysaa inaad la socoto dhacdooyinka, la wadaagto guryaha dhacdooyinkaas, oo aad la wadaagto xogta bogga dadka. Tani waa meesha sixirka dhabta ahi ka dhaco! Iyada oo la dejinayo astaanta martida, waxaad kala shaandheyn kartaa waxyaabaha ku wajahan bartilmaameedka isticmaalaha, soo dir emayl, jadwal emayl, soo dir fariin qoraal ah, iyo / ama bilowga ogeysiiska riixa mobilka.
Iyo, dabcan, dhacdada ugu dambeysa waa iibsi sidaas Mixpanel qabanaya diinta sidoo kale.
Hagaha ugu dambeeya ee mitirrada Pinterest
Aug 16, 2013 at 8: 07 AM
Boostada weyn Doug! Waad ku mahadsan tahay wadaagista! Runtii waa war bixin ..